असाधारण "मुस्कान" ड्रप क्रेपी ग्रिम-ग्रिनिङ ट्रेलर
घर	मनोरन्जन समाचार	असाधारण "मुस्कान" ड्रप क्रेपी ग्रिम-ग्रिनिङ ट्रेलर
by तिमोथी Rawles जुन 22, 2022
by तिमोथी Rawles जुन 22, 2022 1,537 हेराइहरू
"तिमीलाई के मुस्कुराउँछ?" यो चलचित्रको ट्यागलाइन हो।
सबै भन्दा पहिले, एक नयाँ असाधारण हत्या रहस्य? हो, त्यो गर्छ।
का लागि आधिकारिक ट्रेलर मुस्कान सम्भवतः दिनुपर्छ भन्दा बढी दिन्छ । तर वास्तविक प्रश्न यो हो कि हत्या गर्नु अघि मानिसहरूलाई के मुस्कुराइरहेको छ? यस्तो देखिन्छ कि हामीसँग हाम्रो हातमा अर्को असाधारण राक्षस फ्रान्चाइज हुन सक्छ।
शैलीकृत क्यामेराको काम, चाखलाग्दो कथानक, र रोचक आधारले हामीलाई पतनको लागि उत्साहित बनाउँछ मुस्कान सेप्टेम्बर 30 मा थिएटरहरूमा जानेछ।
एक विचित्र, दर्दनाक घटना देखेपछि एक बिरामी, डा. रोज कोटर (सोसी बेकन) ले डरलाग्दो घटनाहरू अनुभव गर्न थाल्छ जुन उनी व्याख्या गर्न सक्दैनन्। जब एक भारी आतंकले उनको जीवनमा कब्जा गर्न थाल्छ, रोजले आफ्नो डरलाग्दो नयाँ वास्तविकताबाट बच्नको लागि आफ्नो समस्याग्रस्त अतीतको सामना गर्नुपर्छ।